Dhageyso: Ciidamada Meletariga oo toogasho ku dilay Nin miino ku aasayay wadad Balcad xiriirisa – Walaal24 Newss
Dhageyso: Ciidamada Meletariga oo toogasho ku dilay Nin miino ku aasayay wadad Balcad xiriirisa
September 29, 2019	Off	By walaal24
Ciidamada militariga Soomaaliya ayaa la sheegay in ay toogteen Nin miino ku aasayay wadada xiriirisa degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobalka Shabeellada Dhexe, inta u dhaxeysa Haan shiikh iyo Gololey.
Taliyaha Qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Gen.Axmed Maxamed Treedisho ayaa xaqiijiyay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay toogasho ku dileen xubin ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, kadib howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen inta u dhaxaysa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad ee gobolka Shabeelada Dhexe.
Warka waxaa uu intaasi raacinayaa in ninka la toogtay uu miino ku aasayay waddada isku xirta Balcad iyo Jowhar, gaar ahaan deegaanka Gololleey ee gobolkaasi.
Sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in dhagarqabahaasi miinada aasayay uu sidoo kale watay bistoolad uu doonayay in uu isku difaaco haddii la arko.
Tan iyo intii ka danbaysay markii ciidamada qaranka ay wiiqeen awooddii kooxda nabad diidka ah ayaa waxay bilaabeen weerarro u badan qaraxyo miino ay la beegsadaan dadka rayidka ah ee isticmaala waddooyinka isku xira magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka.
Qof ka mid ah dadka degaanka ayaa ka waramaya Ninka ay Ciidamada Dowlada ay dileen oo lagu sheegay inuu miino aasayay wadada xiriirisa Degmooyinka Balaca iyo Jowhar inta u dhaxeysa Haan shiikh iyo Gololey.
Halkan hoose ka dhageyso dadka deegaanka:-
Wasiir Omaar oo xarunta (ICAO) heshiis duulimaadyada Rayidka ah kula saxiixday Saldanada Cumaan
Shirka Tubta Horumarinta Dhaqaalaha oo looga hadlay u diyaar garowga kulanka Bangiga iyo Hay’adda Lacagta Adduunka
QM oo ugu hambalyeysay Dowlada Soomaaliyeed Sanad-guurada 59-aad ee ka soo wareegatay Madaxbanaanida
Gudiga KMG ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka Qaranka oo kulan la qaatay gudiga madaxbanaan ee…..
Dhageyso: Gen:- Odawaa oo ka hadlaya Qaraxii ismiidaminta iyo weerarkii lagu qaaday degmada Awdheegle
Dhageyso: Madaxweyne Farmaajo oo Shacabka ka dalbaday iney la shaqeeyan Ciidamada Amniga si looga hortago falalka Amnidaro ee ka dhaca Muqdisho
Daawo: Munaasabada Xuska Qaraxii 14-ka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho
Daawo: Gudiga Joogtada Aqalka Sare iyo Gudiga la socodka dib u eegista dastuurka oo kulan wadayeeshay
Daawo: Shirkii Golaha wasiirada Puntland oo looga hadlay Amaanka iyo tababarada Ciidamada